दुई वर्षकी बालिकाले मास्क न’लगाएको भन्दै आमाछोरीलाई नै विमानबाट झा’रियो ! [भिडियो सहित] – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियदुई वर्षकी बालिकाले मास्क न’लगाएको भन्दै आमाछोरीलाई नै विमानबाट झा’रियो ! [भिडियो सहित]
दुई वर्षकी बालिकाले मास्क न’लगाएको भन्दै आमाछोरीलाई नै विमानबाट झा’रियो ! [भिडियो सहित]
काठमाडौं –अमेरिकामा एक दुई वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएको भन्दै उनको पुरा परिवारलाई नै विमानबाट तल झा’रिएको छ। गत सोमबार स्पि’रिट एयरलाइन्सका स्टाफले ७ वर्षकी ग’र्भव’ती महिला उनकी दुई वर्षकी छोरी, अपांगता भएका छोरा र उनको श्रीमानलाई विमानमा सवार हुन दिएका थिएनन्।
सानी बालिकाले दही खानको लागि मास्क खोलेकी थिइन्। न्युजर्सीबाट फ्लो’रिडाको ओ’र्लान्डोको लागि उड्न लागेको विमानबाट उनीहरुलाई झा’रिएको थियो। यो घटनाको भिडिओ पनि सार्वजनिक भएको छ। ७ वर्षकी ग’र्भवती अभितालले आफूहरुले मास्क लगाएको बताउँदा फ्ला’इट ए’टेन्डेन्टले २ वर्षकी बालिकाले मास्क नलगाएकाले सबैले विमानबाट झ’र्नुपर्ने बताएकी थिइन्।
यद्यपी त्यहाँ सवार यात्रुहरुले विमानका कर्मचारीको वि’रोध जनाए। दुई वर्षकी बालिकाले मास्क खो’लेर दही खानु कुनै अ’परा’ध नभएको भन्दै आवाज उठेको थियो। उनीहरुलाई विमानमा सवार हुन न’दिए आफूहरु सबै विमानबाट बा’हिरिने बताएपछि भने अभितालको परिवार सोही विमानमा चढेर फ्लो’रिडा पुगेका थिए। भिडियो